30 akasurukirwa mitsara iyo ichakubatsira iwe kurwisa iyo | Kuzvibatsira Zviwanikwa
30 akasurukirwa mitsara iyo ichakubatsira iwe kurwisa iyo
Maria Jose Roldan | | Mitsara
Kune vanhu vakasununguka mukugara kwavo vega, zvirinani kwenguva pfupi. Nekuti vanhu vanhu venyama uye neimwe nzira, kusurukirwa kwakatemwa kana kusingadiwe kunogona kutikuvadza zvakanyanya ... kusurukirwa mukati uye pachako hakuna kushata, uyezve, zvinogona kutodikanwa.
Zvinogona kuita kuti uzviwane iwe, uzive zvaunonzwa uye manzwiro aunoita. Nekuti iwe uri munzira uye pamwe nekuti unogara wakakomberedzwa nevanhu, hauna kumbobvira waona kuti uri sei chaizvo mukati. Muchokwadi, kune vanhu vanofarira kugara vari pedyo nevanhu kuti vasawana ivo. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi akanyanya kusurukirwa mitsara?
1 Kusurukirwa kunogona kuve shamwari yakanaka
2 Kune mhando dzakasiyana dzekusurukirwa
3 Kusurukirwa mitsara iyo inoita kuti iwe ufunge
Kusurukirwa kunogona kuve shamwari yakanaka
Uku kukanganisa kukuru, nekuti kusurukirwa kunogona kuve kushamwaridzana kwakanaka, nekuti isu tiri isu, tinogona kuvhara maziso edu kunyika uye kuvhura mukati medu pachedu. Tinogona kuona kuti isu tiri chinhu chakakoshesa pane zvakasikwa pasi redu uye ndosaka tichifanira kuzvitarisira pachedu panyama uye nemweya.
Zvese izvi zvinogona chete kuve zvechokwadi kana iwe ukaita chikamu chako uye uchitsvaga dzimwe nguva dzekusurukirwa wega wega mazuva ese Kukuziva iwe, kuziva iwe ndiwe ani, kana kungofarira uye kuongorora izvo zvinhu zvaunofarira kuita… Kuwana nguva yako wega inzira yekunakidzwa nehupenyu zvakanyanya.
Kune mhando dzakasiyana dzekusurukirwa
Kune kusurukirwa kwatinonzwa tiri tega kunyangwe takakomberedzwa nevanhu, uye mune iko kusurukirwa uko kwatinofanira kuziva kuti sei tichinzwa nenzira iyi. Kusurukirwa, kungave kwakaiswa kana kuzvisarudzira, kunoita kuti tinzwe manzwiro akasiyana.
Ndiwo manzwiro anofanirwa kushandura isu mukati. Tarisa manzwiro ako kana uri wega kuti uwane zvinoita sei kuti unzwe kushaya munhu akakukomberedza. Kusurukirwa kunongova kwakashata kana iwe uchifunga kuti kwakadaro.
Kusurukirwa mitsara iyo inoita kuti iwe ufunge
Pano tinoda kukuratidza mimwe mitsara iyo inoita kuti iwe uzive kuti kusurukirwa chii uye nei kuchikosha muhupenyu hwako. Kana iwe pane imwe nguva iwe uchiona kuti kusurukirwa kunoita kuti unzwe zvakashata, saka iwe unofanirwa kuita chikamu chako uye anotumira nyanzvi kukubatsira kuti unzwisise kuti sei izvi zviri kuitika kwauri uye utsvage mhinduro dzinodiwa kuti uwane nyaradzo mukusurukirwa kwako.
Ungakunda sei kusurukirwa
Panguva ino, nakidzwa nemitsara inotevera yatakugadzirira.
Patinoona kuti isu tiri toga ndipo patinonyanya kuda vamwe.
Kusurukirwa kunoyemurwa uye kunoshuvirwa kana kusingatamburwe, asi kuda kwevanhu kugoverana zvinhu kuri pachena.
Sei, kazhinji, kusurukirwa kuchidzivirirwa? Nekuti pane vashoma kwazvo vanowana kambani navo.
Kutsvaga kwekusingaperi kwemunhu wega wega kuputsa kusurukirwa kwake.
Kutambudzwa kwedu kukuru muhupenyu kunobva mukuti isu tiri toga uye zviito zvedu zvese uye nesimba zvinowanzoita kutiza kubva kune iyo kusurukirwa.
Tinorarama sezvatinorota, tiri toga.
Kusurukirwa kwemunhu hachisi chinhu kunze kwekutya hupenyu.
Kubatana ihwo hupenyu; kudamburwa, kufa.
Isu tinofanirwa kurarama nekusurukirwa kwedu uye iro ramangwana rinotyaira munhu wega wega kurongeka kwezvinhu.
Iye zvino ini ndinotanga kufungisisa pane zvandakafunga, uye kuona kudzika uye mweya, uye ndosaka ikozvino ndichida kusurukirwa zvakanyanya, asi zvakadaro zvishoma.
Kunyora mushonga wekusurukirwa.
Iye murume muhombe ndiye uyo pakati pemapoka anochengeta, nekutapira kwakakwana, kusununguka kwega.
Kuziva kuteerera ndiyo nzira yakanakisa yekurwisa kusurukirwa.
Kuva woga, kunyangwe kungave kwakanyarara sechiedza, kwakaita, sechiedza, chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo, nekuti kuva wega kunokosha kumunhu. Varume vese vanouya munyika ino vega vachisiya vega.
Murume akasimba kwazvo pasi ndiye akasurukirwa.
Iyo huru yepasirese chirongwa chenguva yedu kukwikwidza uye ndosaka munhu wacho achiramba ari oga munyika.
Isu tinosiya ino nyika nenzira imwecheteyo yatinopinda nayo: ndega.
Gehena iri mune iri izwi: kusurukirwa.
Vanowanzo taura kuti murume anoda kuve ega ane mwari kana mhuka zhinji.
Kusurukirwa isimba guru rinokuchengetedza kubva kunjodzi zhinji.
Kusurukirwa humbowo hwekuti kutsvaga kwako kwekubatana kwakabatana.
Kusurukirwa ndiwo mukana wako wakanakisa wekubatana newe.
Kana tiri toga, tinowedzera kusurukirwa. Hupenyu hunoshamisa.
Kana iwe uchida kusurukirwa kwako, uri kuzvida iwe ... uye uchibvumira moyo wako kuvhurika kuti udiwe uye kuda vamwe.
Chete mukusurukirwa kwako ndipo paunowana rugare mukati memoyo wako.
Kusurukirwa ndiyo mukoti wakanakisa wenjere.
Mukusurukirwa pane chete zvinongotora munhu kuti ave ega.
Kusurukirwa hakuite kuti unetseke, kunoita kuti usimbe muhupenyu nekuti zvinokupa iwe mukana wekunyatsoziva zvauri.
Urombo zviri pachena chimwe chikonzero chekutambudzika pamoyo, asi kune zvimwe, sekusurukirwa.
Kusurukirwa hakuna kumbonyanya kuita hutsinye kupfuura paunonzwa uri padhuze neumwe munhu amira kutaura.
Sezvauri kuona, kusurukirwa kunogona kunzwika nenzira dzakasiyana, zvinoenderana nemaonero aunove nawo usati watanga. Kune vanhu vanofunga kuti zvakanyanyisa kukosha kuti ugone kukura mukati uye nekudaro ukwanise kuzviratidza munyika. Kune vamwe, Iko kushungurudzwa kwakazara kusinganzwisisike.
Kune vekupedzisira, pasina kupokana, kusurukirwa kutambudzwa nekuti vanotya kuzviwana. Havazivi mumwe, havazivi zvavanoda uye vanofunga kuti vamwe vanozadza nzvimbo iyoyo kuti vanonzwa mukati mavo nekuti ivo havagone kuzviitira ivo vega.
Kukanganisa kwakakomba. Isu tese tinoda kumbosurukirwa kuti zvirinani kubatana nesu pachedu nevamwe Kuva kwedu toga kwakachengetedzwa zvakanaka kunogona kutiita kuti tiwedzerezve mabhatiri epamoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 30 akasurukirwa mitsara iyo ichakubatsira iwe kurwisa iyo
Ini ndinogamuchira iyo zvakavanzika mazwi
25 mitsara yezuva rababa
Matipi ekuvandudza yako Chirungu kuteerera